Nhau - Zvitanhatu Zvikomborero & Zvikonzero zvekutanga Kudya Peanut Butter
Mabhisikiti uye maKuki
Zvitanhatu Zvakanakira & Zvikonzero zvekutanga Kudya Peanut Butter
Iyo inonyanyo kufarirwa nati inopararira iyo ichaunza zvirokwazvo shanduko yakanaka mukudya kwako ipeanut butter. Inogadzirwa nenzungu dzakaomeswa uye dzakakangwa uye inowanzo kuverengerwa muboka rezvikafu zvine hutano. Iyo izere nezvinovaka muviri zvinobatsira pahutano hwako chero bedzi uchinakirwa zvine mwero. Iyo zvakare ine hwakawanda hwakawanda hwehutano mabhenefiti iwe aunogona kunge usati wamboziva nezvayo!
1. Inovandudza Nyama Nhengo Hutano
Magnesium chinhu chakakosha zvinovaka muviri chinogadzirisa mazana emakemikari mumuviri, nzungu ruomba kuva sosi yakakodzera yaro. Iyo ine ingangoita 12% magnesium yezvinokurudzirwa kudya kwezuva nezuva. Izvi zvinoreva kuti 2 mashupuni eiri rinonaka bota anogona kusimudzira hutano hwako. Inogona kukubatsira mukuchengetedza hutano hune hutano, mapfupa akasimba nemeno, tembiricha yemuviri yakajairika, uye masimba emagetsi akakwirira. Kunze kwezvo, nzungu ruomba runogona zvakare kunatsiridza yako serotonin mazinga ayo anozotungamira kurara zvirinani.
2. Inoderedza Njodzi Yekufa Kusati Kukurumidza
Zvidzidzo zvakaratidza kuti kuisirwa nzungu zuva nezuva kunobatsira mukuderedza njodzi yezvikonzero zvakawanda zvekufa, kunyanya kufa kwemoyo. Izvo zvine polyunsaturated mafuta akapfuma muma antioxidants ayo anobatsira kune hutano hwemwoyo. Aya makomponi anogona zvakare kuderedza yakakwira BP uye kuigadzirisa.
3. Normalizes Kushungurudzika Matanho
Zvidzidzo zvakaratidza kuti chikafu chakapfuma mumafuta senzungu ruomba chine beta-sitosterol iyo inogona kubatsira kudzikisa mazinga ecortisol, iyo hormone inoburitswa kana iwe uchinge uchinetseka. Dzimwe nguva unogona kunzwa nenzira yechishuwo chekutora chinwiwa chakakwira mumafuta emuviri kuti ugadzirise iwo mazinga ecortisol. Muzviitiko izvi, nzungu ruomba chingave chisarudzo chakakodzera. Iwo akakwirisa mwero yemafuta akazara ane hutano ayo anobatsirawo mukuvandudza immune system.
4. Inowedzera Matanho eMagetsi
Peanut butter ndeimwe yezvikafu zvekudya zvinokwanisa kusimbisa simba rako sezvo iri protein yakakura imwe. Iwo mapuroteni uye faibha hazvisi chete zvinotyisa simba sosi, asi zvakare zvinobatsira mukuyera yako yeropa mashuga mazinga.
5. Kurwisa Kufutisa
Kunyangwe peanut butter ine mafuta mazhinji, iine kana zana macalorie mupuniki imwe, zvidzidzo zvakaratidza kuti zvinogona zvakare kukubatsira mukuderedza uremu. Chikafu chine huwandu hwakawanda hwemafuta akazara, seaya anowanikwa munzungu, anogona kubatsira vanhu kudzikisa huremu pamwe nekudzivirira chirwere chemwoyo. Iinewo genistein, chinhu chinobatsira muviri mukuderedza mafuta akachengetwa.
6. Inovandudza Utano hweBongo
Nzungu dzinogona kubatsira hutano hwako hwehuropi nekuda kwevhitamini E, zinc, magnesium, uye niacin irimo. Ivo vanogona zvakare kugadzirisa yako ndangariro uye kugona kugona, izvo zvakanaka kune vanhu vakuru. Dzimwe ongororo dzinoratidza kuti zvinotobatsira mukudzivirira chirwere cheAlzheimer. Nekudaro, hazviite chete kuti iwe uve nehungwaru, asi zvakare zvinodzivirira huropi hwako mukufamba kwenguva. Uye chidya chinotyisa kuna sekuru nasekuru vako!
Post nguva: Aug-26-2021
Yantai Sanniu Import & Export Co, Ltd inyanzvi yekudya uye chinwiwa mumiriri uye co kurongedza kambani kweanopfuura makore gumi.
Room 203, No.310 Zhenzhong St, Fushan District, Yantai, Shandong Province, PRC
Iko kukosha kwehutano hweSesame paste
Hutano mabhenefiti epea protein powder
Makumi matanhatu Mabhenefiti & Zvikonzero zvekutanga Eati ...
10 zvakanakira michero yemagaba
Chikwata Chekuvaka Chiitiko.
Vana Mabhisikiti, Soy Sauce Mapaketi, Hawthorn Strip, Ladyfinger Cookie, Mutsva Bean Curd Stick, Kudya Nzungu Dzakarungwa,